सेनाको टोपी लगाएकोमा अफ्रिदीले भारतीय... :: एजेन्सी :: Setopati
बुधबार, जेठ ८, २०७६
सेनाको टोपी लगाएकोमा अफ्रिदीले भारतीय टिमलाई यसरी उडाए
एजेन्सी कराची, फागुन २९
अस्ट्रेलियाविरूद्धको खेलमा भारतीय टोलीले पुलुवामा हमलामा ज्यान गुमाएका जवानहरूको सम्मानमा आर्मीको क्याप लगाएर मैदानमा उत्रियो। योसँगै टिमले आफ्नो म्याचको पारिश्रमिक पनि ज्यान गुमाएका परिवारको सहयोगका लागि दान गर्‍यो।
भारतीय क्रिकेट खेलाडीको यो रवैयामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पिसिबी)ले आपत्ति प्रकट गर्दै आइसिसमा उजुरी गर्‍यो।
उसले भारतीय क्रिकेट टिमलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। पाकिस्तानका मन्त्री फवाद चौधरीले भारतले खेलमा राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाइसकेका छन्।
पाकिस्तानको उजुरीको भारतलाई कुने नोकसानी भने भएको छैन। आइसिसीले भारतीय खेलाडीले दिवगंत सैनिक जवानप्रति सम्मान प्रकट गरेकाले सो अनुमति दिएको स्पष्ट पारिसकेको छ।
यो प्रकरण अझै सेलाएको छैन्। पाकिस्तानका अलराउण्डर शाहद अफ्रिदीले टिम इण्डियाको यस क्रियाकलापको मजाक उडाएका छन्। सोमबार नेशनल स्टेडियम कराचीमा मिडियासँग कुरा गर्दै अफ्रिदीले मजाक उडाएका हुन्। यसक्रममा टिमका मेनेजर नदीम खानले बिचमा हस्तक्षेप गर्दै पत्रकारलाई सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्ने आग्रह गरेका थिए।
पत्रकारले उनको सो आग्रमा खेद प्रकट गरेपनि अफ्रिदी भने रोकिएनन्, हास्यास्पद टिप्पनी गरिहाले।
'क्याप लगाएपछि किन फेरि फुकालेको।'
भारतका ब्याटस्म्यानका कोच भरत अरूणले मंगलबार बारतको बाउ गरे। उनले टिमले सहि लागेको कुरा गरेको र यसमा सेनाको सम्मान भएको बताए। ''हामीले देशाका लागि जे गर्न पर्ने थियो त्यही गरेका हौं। सेनाले यस देशका लागि गरेको कामको सम्मानका लागि गरिएको हो', उनले भने।
भारत र अस्ट्रेलिया दिल्लीमा बुधबार सिरिजको पाँचौं तथा निर्णायक म्याच खेल्दैछन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २८, २०७५, १०:३९:००
१५ दिनका लागि उपसमिति गएको नागरिकता विधेयक डेढ महिनासम्म अलपत्र
पाँचथर हत्याकाण्डः नुनमा सिसा मिसाएर पहिले नै केहीको हत्या प्रयास
वीच्याट र अलिपेबाट हुने भुक्तानी कसरी रोकिन्छ?
प्रधानमन्त्री कप महिला टी-ट्वान्टी क्रिकेट जेठ २८ देखि
विश्वकप टोलीबाट हटाइएपछि पाकिस्तान खेलाडीले यसरी गरे विरोध!
विराट र ऋषभको मजाक उडाएपछि अस्ट्रेलियाका खेलाडीविरूद्ध खनिए प्रशंसक
विश्वकप क्रिकेटको पाकिस्तानी टोलीको घोषणा, ४ खेलाडी फेरिए
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एक्सपर्टको साथ, विजेतालाई २० लाख र ट्रफी
विश्वकपमा तोड्लान त रोहित र विराटले सौरभ गांगुलीको २० वर्ष पुरानो यो कीर्तिमान
बहादुरी गाथा विष्णुप्रसाद आचार्य